Emebiri ndị na-elekọta America ... | Martech Zone
Ndị America na-emebi emebi. Ọbụna ụfọdụ bụ brats.
Cheedị ijikwa n'otu agwaetiti. Agwaetiti gị nwere obere ikike mmadụ, awa gafere ihe ọ bụla ma ị sụrụ asụsụ dị iche. Dọta ndị ọrụ na agwaetiti gị siri ike n'ihi asụsụ obodo na agwaetiti ahụ. Agwaetiti ahụ adịghị n'akụkụ ebe ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ Caribbean, ọ dị oyi ma dị mmiri mmiri na-ewe ọnwa ụfọdụ na-enye awa nke ìhè. Na-etolite, ndị ọrụ gị gụrụ akwụkwọ ịsụ asụsụ abụọ ọzọ ebe ọ bụ na amachaghị asụsụ gị na mpụga agwaetiti gị.
Dịka onye njikwa na onye otu agwaetiti ahụ, ọ bụ ọrụ gị ịkwaga ndị ọrụ gị n'ọkwá ebe ha ga-aga nke ọma. Ga-arụsi ọrụ ike iji debe ndị ọrụ; n'ihi na, n'agbanyeghị na ọ bụ ụlọ ha, ha nwere ike ịhapụ agwaetiti ahụ mgbe ọ bụla ha chọrọ ịchụso ohere ndị ọzọ. Ga-etinye nnukwu ego na ndị ọrụ gị ma na ụgwọ ọrụ na akụrụngwa. Onye ọ bụla na-arụ ọrụ na-amalite site na izu 5 ezumike kwa afọ. O nwere ike ị gaghị enwe ike ịkwalite ndị mmadụ ngwa ngwa n'ihi na ntụgharị ọrụ na iwe nwere ike lie azụmahịa gị.
Agwaetiti a bụ Iceland. Obodo ahụ bụ Reykjavik. Ọ bụ mba na-adọrọ mmasị. Ndị ya bara ọgaranya na ọdịbendị, akụkọ ihe mere eme, ma nwee otu n'ime ọdịmma ahụike na ọgaranya n'ụwa niile. Ishingkụ azụ na njem bụ ụlọ ọrụ kachasị elu na Iceland. Ha nwere nri kacha mma dị n’ụwa. Àgwàetiti ahụ jupụtara n'ọtụtụ atụmatụ na-adọrọ adọrọ site na glaciers, geysers, na lava.
Companylọ ọrụ m zigara m Iceland n’izu a ka m nyere otu n’ime ndị ahịa anyị aka. Site na mgbe anyi rutere ala, o juru anyi anya. Omenala nke nzukọ a, ọkachamara na nraranye nke ndị ọrụ ahụ dị iche karịa ụlọ ọrụ America ọ bụla m rụtụrụla. Nke bụ eziokwu bụ na echere m na anyị emebiwo.
Na America, ọ bụrụ na ịchọghị onye ọrụ gị ị nwere ike ịchụpụ ha, gwa ha ka ha pụọ, ma ọ bụ mee ka ọ ghara iru ala na ha ga-ahapụ. Ọ bụrụ na ha anaghị arụpụta ihe, ịkwesighi itinye ihe onwunwe iji nweta nke ọhụrụ. Arụpụta anyị na mba a maara nke ọma n'ụwa niile mana ọ bụghị n'ihi nnukwu ndị njikwa anyị. Ọ bụ n'ihi nnukwu akụ mmadụ anyị nwere. Ọ pụtara na anyị ekwesịghị ijikwa. Anyị enweghị mkpa idu. Anyị anaghị ele ogologo oge ụlọ ọrụ anya dị ka akụ dị ogologo oge onye ọrụ ga-anọnyere ụlọ ọrụ; anyị na-elekwasị ha anya maka adịghị ike ha.
Onye ahịa anyị letara bụ azụmahịa bara uru na ụlọ ọrụ mba ụwa nke na-eju ebe niile. Ha na-eche ọtụtụ nsogbu ihu karịa anyị. N'ezie, ndị asọmpi ha na mba anyị nwere ike ịda ụgwọ dị ka akụkụ nke atụmatụ azụmaahịa ha! Ha na-elekwasị anya na mma, ebe ndị asọmpi ha na-elekwasị anya na ọnụahịa. Ha nwere atumatu ogologo oge, ebe ndi na-asọmpi ha na-echegbu onwe ha banyere ọnụahịa ngwaahịa taa. Ndụ ha chọrọ ya, ha na-ebutekwa ya.
N'ebe niile, ọdịbendị ha na nsogbu nke gburugburu ha na-achọ ka ha bụrụ ndị na-ere ahịa ka mma, ndị na-azụ ahịa ka mma, na karịa, ndị njikwa ka mma. Ka anyị na ọtụtụ ndị ọrụ nọdụrụ na nzukọ anyị, anyị enweghị ike ị mata nke bụ akara n'ihu na ndị bụ ndị isi nchịkwa - ha niile maara ihe, nwee ntụkwasị obi, na-ekwu okwu ma na-arụ ọrụ.
N'ime ọrụ m, ezutewo m ndị njikwa 1 ma ọ bụ 2 nwere ike ịsọ mpi na gburugburu a. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ puku ndị ọzọ mụ na ha rụkọrọ ọrụ anaghị ejide kandụl. Ikwu eziokwu, echere m na m bụ otu n'ime ndị ikpeazụ…. Amaghị m na m nwere ike ịga nke ọma ebe ahụ.
Emebiwo ndi oru ayi. Ha ekwesighi ijikwa, ọ dịghị ha mkpa imeghari na gburugburu ha, ha na-agbanwe gburugburu ebe obibi iji kpuchie enweghị ike idu ha. N'ebe ụfọdụ azụmaahịa, ntụgharị ndị ọrụ bụ ọbụna uru n'ihi na ọ nwere ike ịkwụsị ụgwọ. Somefọdụ kwenyere na ọ dị ọnụ ala karịa ịnweta onye ọrụ ọhụụ karịa ịhapụ onye nwere ahụmahụ.
Nathan Myhrvold, onye bụbu Chief Scientist, na Microsoft kwuru, sị, "Ndị nrụpụta ngwanrọ kachasị arụpụta karịa ndị nrụpụta sọftụwia na-esiteghị na 10X ma ọ bụ 100X, ma ọ bụ ọbụna 1,000X, mana 10,000X." Ekwenyesiri m ike na a ga-emeghachi nkwupụta a n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Nke bu eziokwu bu na - ezigbo ndi n’ego abaghi ​​uru Ọzọ karịa ndị ọrụ ndị ọzọ, ha bara uru exponentially ihe.
Ka ụwa anyị na-agakọọ ọnụ, agwaetiti anyị pere mpe. America ugbu a na - aghọ ndị ahịa nke ahịa ụwa niile anyị agaghị enwe ihe ịga nke ọma ọ gwụla ma anyị jidere ndị njikwa anyị ajụjụ. Ihe chọrọ Iceland ka ọ rụọ abụghị nke ga-eme n’ọdịnihu n’obodo anyị. Ezigbo ndị ọrụ na ndị njikwa anyị ga-akpọrọ ha ụlọ ọrụ ndị ji uru ha kpọrọ ihe. Ndị njikwa ọjọọ ga-agbago ụlọ ọrụ ọjọọ ha n'ime ala.
Tags: americazuru ụwa ọnụakụ na ụba ụwaicelandmbamanagementmanagerụwa